Umthandazo weSanta Rita waseCassia Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ngamaxesha apho yonke into ibonakala ingenakwenzeka kwaye izinto zingahambi ngendlela engalindelekanga, lixesha elifanelekileyo lokuthandaza kwi-Intanethi umthandazo weSanta Rita waseCassia. Kule nqaku siza kukubonisa indlela.
1 Umthandazo kuSanta Rita waseCasia
1.1 Umthandazo kuTata, Yibonge uMariya kunye no-Saint Rita
1.2 Umthandazo wozuko lukaSanta Rita
1.3 Umthandazo kuSanta Rita woSapho
1.3.1 Umthandazo kuThixo egameni likaSanta Rita
Umthandazo kuSanta Rita waseCasia
Mkhulu uSanta Rita, wena othabatha phantsi kwesifuba sakho abo bethu banqwenela, wena unika ithemba xa kungekho namnye oseleyo. Owu, obalekela kwintlungu nakusizi olukhokelela amatakane kwindlela engeyiyo, ndiyakucela, nkosikazi, ndithembele kumandla akho amakhulu, ukuba ususe obu bunzima ndibufumanayo namhlanje emagxeni am.
Othandekayo uSanta Rita, ungandinceda kule meko? Ndiyakucela, ngentliziyo yam isesandleni sam, ukuba undinike intuthuzelo kweli dabi ngamanye amaxesha elibonakala lingenakwenzeka ukulwa. Sukujonga kude nentliziyo yam enzima. Ndiza kuwe, kuba uyabazi ubunzima obunokuthwalwa yintliziyo, iinyembezi kunye nendlela enzima ebekwa nguThixo phambi kwabanye babakhonzi bakhe.
Ndicela wena, inceba, ukuba undincede! Yima phambi koThixo egameni lam, undibongozele, ndiyeke ndilwe eli dabi ndixhome intloko, ndifumanele oko kwandiphikayo, (yitsho isibongozo). Amen.
Umthandazo kuTata, Yibonge uMariya kunye no-Saint Rita
Oyena Uphakamileyo uBawo wasezulwini, Oyedwa oyiNgcwele Yibingelela uMariya, egameni lakho ndiyakuthetha nawe, Rita oNgcwele ongumgcini wezinto ezingenakwenzeka. Wena woyise ubunzima nobunzima obuninzi ukuze uzinikele kwiNkosi yethu uYesu Krestu. Namhlanje ndiyakucela ukuba umamele isikhalo sam sicela uncedo ebusweni beentlungu ezixinzezelayo entliziyweni yam. Ndingabuyela kuwe, mphathi, ukutshintsha ikamva lam kwaye undincede.
Umphefumlo wam awusenako ukuthwala ububi obuninzi kwaye yonke imihla amathuba angenasiphelo avulekileyo phambi kwam ayandityhafisa. Ndiyakucela ukuba uvule intliziyo yakho kum, undivumele ndifumane ngaphakathi kwam amandla ukuphakama uphume kule meko. UBawo wethu waseZulwini wehlise umnwe wakhe ukuze akhethe wena, Rita oNgcwele, ukubonelela ngendlela yokuphuma kokungenakwenzeka, ke ngokuthobeka nentlonipho ndiguqa phambi kwakho, ndilinde umphefumlo wakho onobubele ukuba uchukumise owam.
Ndibonise indlela, ndiyakubuza, saint yam! Ndifundise ukuba ndingaphuma njani kumgxobhozo endiwenzileyo, nceda undinike uxolelo nothando lwakho. Ndivuze, ndiyakubuza. Ngokubuyisa ndithembisa ukuguqa phambi kwakho, ukusukela namhlanje ukuya phambili. Amen.
Umthandazo wozuko lukaSanta Rita
Owu Saint Rita, oNgcwele ozukileyo wamatyala alahlekileyo! Namhlanje ndiyakucela, ngenxa yenceba yakho nozuko lwakho. Ukuzithemba kuyikhukulisile intliziyo yam ngamathuba owanikezela kwindawo yakho kwindawo yeNkosi.
Ndizibeka phambi kwakho, oyiNgcwele onobubele, ukuthandazela ukuba undithandazele phambi koThixo wethu, ukuze, ngobubele bakhe nentliziyo yakhe ezinikeleyo, andinike into endiyifunayo kwaye andinike inceba yakhe engapheliyo. Wena othe ebomini bakho wabonisa kungekuphela nje ukuba uzele uthando kunye nomonde, kodwa nesibindi kunye nobuchule. Ndiyazi ukuba uyakuweva amazwi akho ukuba undibuze ngaphambi koBabalo lwaKhe. Ndiyakucela ngoku, undincede ndifumane le nto ndiyifunayo (yenza isicelo).
Wena obambe iimfundiso ezinkulu, awuzicingeli kwaye uzinikele, uhambelana kwaye uyathandeka. Ukuba uphuma kabuhlungu kunye nobunzima. Ndiyakucela, mfazi ugcwele ukulunga, cela uThixo ukuba andinike umlilo ophilayo wothando lwakhe, kuba ndihlala ezulwini nasemhlabeni womntu ofayo.
Ndiyathandaza ukuba umthandazo wam uzokuviwa kwaye ndiyathemba ukuba uzakundinika ithuba lokuya kumaxesha olonwabo ebomini. Cela uBawo uSomandla ukuba asikhusele.
Umthandazo kuSanta Rita woSapho
Othandekayo uSanta Rita waseCasia! USanta omangalisayo, okhaliphileyo nonamandla, ethambile kwaye enomlingiswa owomeleleyo. Nina nithanda uThixo ngaphezu kweento zonke, nina nibonisa uthando nesisa kuthi sonke, iimvana zeNkosi. Ndibuze, Santa. Hlambulula ongendawo kwaye uhlambele emphefumlweni wam kwaye ndivumele ukuba ndiphile ngokulungileyo.
Namhlanje ndiza kuwe, ndinexhala engqondweni nasentliziyweni yam, kusapho lwam olujamelene nobunzima. Ndiyakucela ukuba uthethelele ngothando lwakho olukhulu ebomini babathandekayo bam. Ngamaxesha entlungu ndiyacela ukuba bakwazi ukujonga kuwe ngoncedo, kwaye babubone ubungcwele bakho. Mna, ndinombulelo ongazenzisiyo kuThixo, ndiyazi ukuba ungumthunywa othembekileyo kwaye, ukuba siza kuwe ngenjongo ezimsulwa, uya kuba nakho ukuphelisa okusonzakalisayo.
Kubo ndiyakucela, Mnikeli wezinto ezingenakwenzeka, bancede balungise iimpazamo zabo, baphume kabuhlungu, bashiye iintlungu ngasemva njengoko wenzayo xa waqubuda phambi kweNkosi. Ndishiya phambi kwakho impendulo yomthandazo wam kwaye ndiyathemba ukuba uyakundithathela ingqalelo, Nenekazi lam. Amen.
Umthandazo kuThixo egameni likaSanta Rita
Nkosi yam! Wena ulungile kwaye unamandla onke, wena obonisa uthando lwakho kunye nokuthantamisa ngokumamela isicaka sakho, uSanta Rita, kwaye unike isiqinisekiso kwisicelo sakhe esingenakwenzeka, vuza uthando kunye nokuqina kwinkolelo yoko uthembisayo, yiba nenceba kuthi Aboni xa inkxwaleko ikhona ebomini bethu, susa intlekele yexesha elizayo, ukuze nabo bangakholelwayo kuwe bangaguqi phambi kwentando yakho bayiqonde into yokuba nguwe ovuza abo bathobekileyo, okhusela abo Awunanto kwaye uqinisa imizimba kunye nemimoya yabo bakholelwa kuwe, egameni likaSanta Rita waseCasia kunye neNkosi yethu uYesu, sithandaza kuwe Thixo. Amen.
Kuhlala kubalulekile ukukhumbula ukuba ukuze uThixo nabaNgcwele baqonde kwaye banike imithandazo, kufuneka yenziwe ngokunyaniseka, ekuthobekeni kunye nothando lwenene lweNkosi ngamazwi ethu.
Ukuba ulithandile eli nqaku kwaye likuncede, siyakumema ukuba undwendwele amakhonkco acetyiswayo apha ngezantsi: